व्यक्तिगत जीवन र टेलर Lautner को जीवनी
तारा व्यक्तिगत जीवनमा विवरण सधैं सार्वजनिक, आफ्नो रचनात्मक क्यारियर मात्र होइन ज्ञात मान्छे, तर पनि जीवनी बाहिर आउँछन्। टेलर Lautner यो ढाँचा पनि छोयो। जवान अभिनेता को सागा "गोधूलि" मा आफ्नो भूमिका लागि ज्ञात थियो। त्यहाँ उहाँले एक भारतीय-हिंसात्मक werewolf को भूमिका खेलेका। मांसपेशीमा र एक राम्रो अनुहार तुरुन्तै फिलिम को दर्शक र प्रशंसक captivated। जीवनी टेलर Lautner पनि धनी छैन, र यो बुझ्ने उमेर अभिनेता छ। टेलर बस 21 उहाँले मिशिगन जन्म भएको थियो। आफ्नो आमाबाबु - संयुक्त राज्य अमेरिका को निवासी, तर यो एक व्युत्पत्ति-इंडियन्स परिवार छ, यो उनको चरित्र संग अभिनेता को शारीरिक समानता बताउँछन्।
कलिलो उमेर देखि टेलर खेल र सिनेमा रुचि छ। आठ वर्ष मा, त्यो कराटे मा कालो बेल्ट मालिक बन्छन्। उहाँले परीक्षण र सुन्न मा जान सुरु हुन्छ। 2001 मा पहिले नै उहाँले आफ्नो अभिनय debut गरे: उहाँले फिल्म भूमिका खेलेका "हत्यारा को छाया।" जीवनी टेलर Lautner स्पष्ट जीवनमा तपाईं लगनशीलता र मेहनत गर्न ठूलो कुरा धन्यवाद प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्छ। केटा सबै थियो समय - उहाँले कराटे संलग्न थियो, बेसबल, चलचित्रहरू र कार्टून वर्ण को पनि आवाज काम। र "गोधूलि" को सेट मा भयो कि कहानी, कि एक राम्रो प्रमाण हो।
को "गोधूलि" मा फिलिम
टेलर Lautner तुरुन्तै याकूबका भूमिका लागि कास्टिंग भाग लिन चाहँदैनथे। तर उहाँले विश्वास प्रबन्धक पछि सहमत भए। यसलाई डाली थियो, तर पहिलो फिल्म पछि बदलिएको थियो। याकूबले काला अगाडि प्रमुख परिवर्तन को लागि, उहाँले सिद्ध आकार हुनुपर्ने थियो। टेलर उहाँले यो भूमिका आवश्यक छ कि निर्धारित थियो। साक्षात्कार पछि उहाँले जेक काला बन्ने निकटतम सम्भव समय मा लक्ष्य सेट बताए। र त्यो, त्यो मांसपेशिहरु को 8 किलोग्राम बढाउनका व्यवस्थित गरे। र परिणाम के थियो! सिनेमाहरू मा बालिका को "गोधूलि" शर्ट शूटिंग को दोस्रो भाग मा याकूबले रूपमा आनन्द संग squealed। रबर्ट Pattinson अभिनेताहरु यो हटान पछि यो हुनुपर्छ, कि joked। यहाँ एक रोचक रचनात्मक जीवनी हो। टेलर Lautner लागि नामांकित भएको थियो पुरस्कार "ओस्कार" नामांकन "यस वर्षको निर्णायक" मा, तर आफ्नो सहकर्मी वरिपरि हिंडे "गोधूलि" रबर्ट Pattinson। टेलर 18 हुँदा उनले उच्चतम-भुक्तानी अभिनेता नाबालिग रूपमा मान्यता थियो। "गोधूलि" पछि टेलर Lautner धेरै चलचित्रमा तारा अङ्कित, तर तिनीहरूले यस्तो लोकप्रियता छैन।
टेलर Lautner, जीवनी लाखौं को मूर्ति, व्यक्तिगत जीवन जवान groupies रुचि छ, आफ्नो आमाबाबु संग बसोबास, र टिप्पणी जीवनको एक त्यस्तो तरिका आफ्नो लिङ्कमा। तर, यो प्रसिद्ध गायक Selena Gomez सहित धेरै महिला, को लागि परिवर्तन भएको छ। अब अभिनेता दोस्रो आधा को खोज मा छ। आफ्नो साक्षात्कार मा, त्यो बालिका को निष्कपटता र को naturalness कदर गर्छौं भनेर, नाटक पहिचान गर्दैन भन्नुभयो। जीवनी टेलर Lautner मुख्य रूप आफ्नो सफलता र उपलब्धिहरू सम्बन्धित छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मा कुनै पनि परिवर्तन उहाँले सानो थियो। अभिनेता स्वीकार्छन् निजी जीवन को कि निगरानी - यो मात्र माइनस को अभिनय पेशा हो। म सधैं देख्न चाहँदैनन्। उहाँले Tinted Windows संग एक कार मा विशेष यात्रा किन शायद कि छ।
21 औं शताब्दीको सर्वश्रेष्ठ हास्य - फिल्म कला connoisseurs द्वारा दर्जा दिइएको छ
Devid Uorner: Filmography र फोटो
Dzhon डेरेक - एक भूल मूर्ति
Vensan Kassel। जो संसारमा सबैभन्दा सुन्दर महिला को एक जित्यो फ्रांसीसी, को इतिहास - मोनिका Bellucci
मिखाइल Chernyak, सिंहासनमा "Smeshariki"
Dzhud Lou: Filmography र जीवनी। Dzhuda Lou राम्रो चलचित्र
ब्याज धारकों - यो हुनुहुन्छ? धोका लगानीकर्ताले नबन्न कसरी
ग्रीवा गर्भावस्था: कारण, लक्षण, निदान
स्थिर माछा के खाना पकाउनु? मनपर्ने व्यञ्जनहरु
सुक्खा आँखा: कारणहरू र उपचार लोक उपचार र घटेको को
मर्सी को जनजाति - भयानक रहस्य
फोन नम्बर थर कसरी पाउन? मात्र फोन नम्बर द्वारा मालिक कसरी पाउन सिक्न!
सामान्य दबावमा छिटो पल्स धेरै कारणहरू छन्।
ट्रयाक्टर टी-74: सुविधा र पर्यावरण निर्दिष्टीकरण
लन mowers हात - शीर्षक मानिसले बनाएको कृति सिर्जना मा आफ्नो सहायक "लन।"
ट्रान्स बोसो - यो के हो? तिनीहरूले शरीर खतरनाक छन् जहाँसम्म?